Mibvunzo - FAQ - Shanghai Chigong Industrial Co, Ltd.
SCIC inogadzira here?
Ehe, SCIC inotenderera yekubatanidza cheni inogadzira kweanopfuura makore makumi matatu ekushandira musika weChinese pamwe nemisika yekukunze kwenyika kumigodhi nekusimudza kwemaindasitiri & kubirira zvikumbiro. Isu tinogadzira SCIC izvozvi kusimudzira kushambadzira kwepasi rese kupa vatengi pasi rese nebasa riri nani uye nehunyanzvi.
Ndezvipi zviyero zvezvigadzirwa zvinogadzirwa neSICIC?
Isu tine hunyanzvi mukugadzira yakakomberedza link cheni dzegiredhi repamusoro uye simba remakambani emigodhi yemarasha Armored Face Conveyors (AFC), Beam Stage Loader (BSL), michina yemisoro yemusoro, pamwe necheni yekubatanidza cheni; isu tinogadzira Giredhi 70, Giredhi 80 uye Giredhi 100 ngetani dzekusimudza uye kubiridzira (ketani zvidhina), maeleti emabhaketi neindasitiri yekuredza.
Iwe unochengetedza yakazara imba yekuyedza uye yekuongorora zvivakwa uye matanho?
Hongu, tinoita zveimba miedzo inosanganisira yekugadzira simba bvunzo, kutyora bvunzo bvunzo, charpy V notch kukanganisa bvunzo, kukotama bvunzo, tensile bvunzo, kuomarara bvunzo, isiri yekuparadza bvunzo (NDE), macro bvunzo uye micro kuongororwa, kuguma kwechinhu kuongorora, nezvimwe. , zvinoenderana neDIN 22252, DIN EN 818 zviyero uye zvinodiwa nemutengi.
Unoita ODM uye OEM?
Ehe, neyedu otomatiki uye marobhoti michina uye vane ruzivo mainjiniya, isu tinogona kuita ODM neOEM kutenderera yekubatanidza ngetani kune vatengi 'maratidziro
Iwe une hushoma hwehuwandu hwehuwandu (MOQ)?
Kune mutengi wekutanga kuraira, hapana MOQ inodikanwa, uye isu tinofara kupa huwandu hunoshanduka hwekushandisa kwemuedzo wemutengi.
Chii chinonzi cheni yako kupedzisa / kupfeka?
Isu tinopa akasiyana mavara ekushongedza pavatengi zvinodikanwa, pamwe nekukwirisa uye dzimwe nzira dzekupedzisa pamusangano kutaurirana.
Chii chako cheni kurongedza zvinoreva?
Isu tinopa akasiyana mapakeji nzira, kusanganisira jumbo mabhegi, madhiramu, pallets, simbi mafuremu, nezvimwe.
Chii chako vimbiso yehutano uye garandi?
Isu tinoburitsa yakazara bvunzo bvunzo uye mapikicha ekudzokorora kwevatengi panguva yekugadzira uye usati waburitsa kuratidza kusunungurwa pakuburitsa. Kana paine kukundikana panguva yedu yekutenderera keteni sevhisi sevhisi, isu tinenge tichishandira pamwe nemutengi pakuongorora kwekutadza (kusanganisira kuyedzazve) kuona zvikonzero uye zvisarudzo zvakakodzera kunzwisisana nekugamuchirwa.